Izindlela zokuqoqa izinwele ezinde emadodeni | Amadoda aSitayela
Ungabopha kanjani izinwele ezinde emadodeni
Njengamanje kujwayelekile ukubona amadoda anezinwele ezindeNgaphezu kweqiniso lokuthi le fashini ibilokhu iqhubeka njalo emibuthanweni ethile, njengabaculi nama-bohemians, kanye nakwabesilisa abanesifiso sezinwele ababona ezinwele ezinde elinye ithuba lokugqamisa ubuntu babo.
Kepha yize izinwele ezinde emadodeni Kungabukeka kukuhle kakhulu, kuyiqiniso futhi ukuthi kwesinye isikhathi kungacasula, ngaphezu kokulula kakhulu ukukuxaka, ngakho-ke uma uhlose ukugqoka, noma usunezinwele ezinde, kungasiza kakhulu ukwazi ezinye izindlela bopha izinwele ezinde emadodeni.
1 Amakhanda ezinwele zesilisa
2 Ama-pigtails anwebeka
Amakhanda ezinwele zesilisa
Ngokuqinisekile wake wambona uDavid Beckham egqoka umhlwenga ococekile ngekhanda, ngoba lokhu kusebenza kuvamile emkhakheni wezemidlalo, ngoba kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi kuyasebenza kakhulu, ukuhlela izinwele ngobunono, nokusula ebunzini nasezinhlangothini noma imiphi imicu ecasulayo.
Ungasebenzisa womabili amabhande ekhanda epulasitiki noma ensimbi, abekwe ngemuva kwezindlebe bese ubuyisela izinwele emuva; ngisho nebhande lekhanda elijikayo elisonga ikhanda.
Nge izingulube zezingulube ungafaka isitayela sezinwele zakho kwi-ponytail yakudala noma i-ponytail yesigamu. Kungcono ukuthatha izinwele ngemuva kwezindlebe, uzibambe emgodini womgogodla entanyeni yentamo.
Ngokunjalo, le ndlela yokubamba izinwele zamadoda ibukeka yinhle uma phambilini usebenzisa i-gel noma i-fixative, ukuze unikeze izinwele zakho ukubukeka okuyinkimbinkimbi nokuhle.
Abaningi bangakuthatha lokhu njengezitayela zezinwele kwabesifazane, kepha iqiniso ukuthi, kuya ngesimo sobuso bakho, ngaphezu kobuntu bakho, impeller kungakhanga kakhulu kumuntu wesilisa. Ukufeza lokhu, kufanele wenze umsila kuphela, bese ugoqa izinwele, uwubambe ngebhande elincane lokunwebeka, noma nge-ondulin.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungabopha kanjani izinwele ezinde emadodeni
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi, lungisize kakhulu.
Le ntwasahlobo, izitayela ngamasokisi anesibindi
Ama-blazers entwasahlobo amahlanu